အွန်လိုင်းန်ဆောင်မှုများ | October 2019
အဲဒီမှာအထူးသညျဤစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဓာတ်ပုံများဖြတ်တောက်ရန်န်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, အများဆုံးရိုးရှင်းသောနှင့်အတူစတင်ဖြစ်ပြီး, အပြည့်အဝစုံတဲ့အယ်ဒီတာတွေနဲ့အဆုံးသတ်။ သငျသညျအများအပြားရွေးချယ်စရာကြိုးစားအမြဲတမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ယခင်ကသီးနှံစိုက်ပျိုးဘို့ Options ကိုန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း - ပထမဦးဆုံးမှာအများဆုံးစရိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မည်, ကြှနျုပျတို့တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအဆင့်မြင့်ဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့။
အွန်လိုင်းသီချင်းတစ်ခုရဲ့ tempo ပြောင်းနည်း
တေးဂီတရေးစပ်အတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါအရှိန်မြှင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အသံဖိုင်နှေးကွေးရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာခဏလည်းမရှိ။ ဥပမာအားဖြင့်, အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဆိုတော်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်လမ်းကြောင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်လိုအပ်သည်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးယင်း၏သံကိုတိုးတက်စေရန်။ ဒါကြောင့်အထူးကို web tools တွေကိုသုံးစွဲဖို့အတှကျဒီလိုစစ်ဆင်ရေး, သို့သော်, Audacity သို့မဟုတ် Adobe ကစာရင်းစစ်ကဲ့သို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအယ်ဒီတာတဦးအတွက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ် Perform ။
အွန်လိုင်းဘာသာပြန် Morse ကကုဒ်
အက္ခရာ, ဂဏန်းနဲ့ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ် coding ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတစ်ခုမှာ Morse ကကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ encryption စက်နှင့်ဒက်ရှ်အဖြစ်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ထားတဲ့ရှည်လျားတိုတိုအချက်ပြမှုများ၏အသုံးပြုမှု, မှတစ်ဆင့်ရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ စာလုံး၏ခွဲခြာယင်းသည်အပြင်, အဲဒီမှာခေတ္တနား။ အလွန်အကျွံ Cyrillic, လကျတငျအတွက် Morse က code ကိုဘာသာပြန်ဆိုကြိုးစားအားထုတ်မှု, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်မပါဘဲသင်သည်တတ်နိုင်အထူးပြုအင်တာနက်ကိုအရင်းအမြစ်များပေါ်ပေါက်ရေး။
အွန်လိုင်း FB2 ဖိုင် format နဲ့ Reading
စက္ကူစာအုပ်များနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်ရန်ယခုအီလက်ထရောနစ်လာကြ၏။ အသုံးပြုသူများသည်သင်၏ကွန်ပျူတာ, စမတ်ဖုန်း, ဒါမှမဟုတ် formats အမျိုးမျိုးနဲ့ထပ်မံစာဖတ်ခြင်းများအတွက်အထူးကိရိယာသူတို့ကို download လုပ်ပါ။ ဒေတာအမျိုးအစားအားလုံးကိုများထဲတွင်ပုံမှန် FB2 နိုင်ပါတယ် - ကလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့အားလုံးနီးပါး devaysa နှင့်အစီအစဉ်များအားဖြင့်ထောက်ခံတစ်ခုဖြစ်သည်။
DWG အွန်လိုင်းရန် PDF ဖိုင်ရယူရန်ပြောင်း
PDF ကိုစာသားနဲ့ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာသိုလှောင်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖိုင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်စာရွက်စာတမ်းများ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစား၏ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဖို့လုံးဝနီးပါးမဆို fixed သို့မဟုတ်ခရီးဆောင်ကိရိယာများပေါ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် - ဒီကြွယ်ဝ၏အဘို့အပလီကေးရှင်း။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့သင်ပုံဆွဲ edited ခံရဖို့လွှဲပြောင်းခဲ့ PDF ကို-ဖိုင်ထဲမှာဆိုရငျကော
မဟုတ်အမြဲတမ်းပရိုဂရမ်မာသူကုဒ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်သောမှတဆင့်လက်အထူးဆော့ဗ်ဝဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါသင် code နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်လက်မှာမဟုတျပါဘူးဆိုရင်အခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ဒီဆိုက်များနှစ်ခုအားဆွေးနွေးရန်နှင့်သူတို့ထဲမှာအသေးစိတ်စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
ကီးဘုတ်တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုသို့သတင်းအချက်အလက်များဝင်များအတွက်အဓိကစက်မှုကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒီခြယ်လှယ်အတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်စေးကပ်သော့မဟုတ်သူတွေကိုဇာတ်ကောင်ဒါအပေါ်ကျနော်တို့နှိပ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အခါ, မနှစ်မြို့ဖွယ်အချိန်လေးနိုင်ပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားသူမကတည်ရှိသည်အတိအကျအရာကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်: ရိုက်သွင်းရေးကိရိယာများသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲ၏စက်ပြင်၌သင်စာသားကိုရိုက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်။
စနစ်တကျရှေးခယျြသောဂီတမသက်ဆိုင်ယင်း၏အကြောင်းအရာနီးပါးမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုကြီးစွာသောထို့အပြင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသံဖမ်း Add သင်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြု, အထူးဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။ များစွာသောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများရှိပါတယ်အွန်လိုင်းဂီတဗီဒီယိုပေါင်းထည့်ခြင်း, အားလုံးနီးပါးအလိုအလျှောက်ဂီတ add ဖို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ရာ၏။
အွန်လိုင်းပွင့်လင်း DOCX ဖိုင်တွေ
ဒါဟာမကြာခဏတိကျတဲ့စာရွက်စာတမ်းဖွင့်ဖို့အရေးပေါ်လိုအပ်လျက်, တပ်မက်လိုချင်သောအစီအစဉ်ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ အသုံးအများဆုံးမူကွဲ - ထူထောင်သည် Microsoft Office ကိုအထုပ်များနှင့် DOCX-ဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့, အကျိုးဆက်အဖြစ်, နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပြဿနာကိုသက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
PNG format နဲ့ပုံရိပ်တွေကို JPG အွန်လိုင်းပြောင်း
မကြာခဏအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့လူကြိုက်များ image ကိုကို formats ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကွာခြားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်တယောက်ကိုတယောက်အမျိုးအစားကနေဖိုင်တွေအဖြစ်ပြောင်းပေးဘို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအထူးအစီအစဉ်များ၏အကူအညီနှင့်အတူကချွတ်ဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအစဉ်အမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။
ငွေတောင်းခံလွှာ - ဖောက်သည်ဖို့ကုန်စည်များပေးပို့ခြင်းအမှန်တကယ် certifies ပေးသောအထူးအခွန်စာရွက်စာတမ်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများများအတွက်ငွေပေးချေ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်။ အခွန်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအပြောင်းအလဲများအတွက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်စာရွက်စာတမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ။ ခက်ခဲသည်လူအပေါင်းတို့သည်အပြောင်းအလဲခြေရာခံထားပါ။ သငျသညျမှန်ကန်သောသည်ဥပဒေပြုသို့ delve ချင်ပေမယ့်ငွေတောင်းခံလွှာအတွက်ဖြည့်ချင်ကြဘူးဆိုပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုတဦးတည်းကိုအသုံးပြုပါ။
အွန်လိုင်း JPG ဖိုင် CR2 ပြောင်းလုပ်နည်း
တစ်ခါတစ်ရံထိုပြည်၌သင်တို့သည် CR2 ပုံရိပ်တွေကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါအခြေအနေများဖြစ်ကြပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ဓါတ်ပုံများကြည့်ရှုဖို့ built-in OS ကို tool ကိုမသိသော extension ကို၏ညညျးညူ။ CR2 - သင်ပစ်ခတ်မှု၏ထားတဲ့မှာလုပ်ငန်းစဉ်ပုံရိပ် parameters တွေကိုနှင့်အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာဓာတ်ပုံ format နဲ့။ အထူးသပုံရိပ်ကိုအရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဓာတ်ပုံပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများ၏လူသိထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးက extension Created ။
အွန်လိုင်းတစ်ဦး DWG file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
DWG အတွက် files - AutoCAD ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Two-ရှုထောင်နှင့်သုံးရှုထောင်အဖြစ်ရေးဆွဲ, ။ မလိုလားအပ်သောတိုးချဲ့မှု "ပုံဆွဲ" ကိုဆိုလိုတာပါ။ အဆင်သင့်ဖိုင်ကိုအထူးဆော့ဗ်ဝဲ၏အကူအညီနှင့်အတူကြည့်ရှုသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ DWG ဖိုင်တွေနဲ့အတူအလုပျအတှကျက်ဘ်ဆိုက်များ DWG ရေးဆွဲအတူအလုပ်အစီအစဉ်များကိုသင့်ကွန်ပျူတာကို download လုပ်ချင်ကြသည်မဟုတ်လော
အဘယ်သို့ငါတဦးတည်းအွန်လိုင်းသို့နှစ်ခုဓာတ်ပုံများ join လို့ရပါတယ်
တော်တော်အသုံးဝင် function ကို, ရုပ်ပုံများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများတွင်အသုံးပြုသည့် - တစ်ခုတည်းပုံရိပ်သို့နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဓာတ်ပုံများ Bonding ။ ထိုမှတပါး, ကကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များအပေါ်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်, သင်လုပ်နိုင်သည်, သို့သော်ဤအစီအစဉ်ကိုနားလညျဖို့အတော်လေးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည်, Photoshop မှာ image ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
XLSX ဖိုင်တွေ XLS သို့ကူးပြောင်းရန်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ
XLS - သငျ 2007 ခုထက်အသက်ကြီး Excel ကိုမှ XLSX-file ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ရှိပါကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအစောပိုင်းကပုံစံသို့ကူးပြောင်းခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောအသွင်ပြောင်းသင့် browser တွင်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်နိုင်ပါသည် - အွန်လိုင်း။ ထိုသို့ပြုမှ, ကြှနျုပျတို့ကိုဤဆောင်းပါးအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်နည်း။
အွန်လိုင်း PDF ကိုမှ TIFF ပြောင်း
TIFF - စကင်ဖတ်ဖို့သို့မဟုတ်စက္ကူစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံနှိပ်ပုံရိပ်တွေရဲ့ contents ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအခါရလဒ်မကြာခဏအကြီးအအရောင်အတိမ်အနက်နှင့်အတူပုံရိပ်တွေအစုတခုထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် format ကိုအပြည့်အဝအားလုံးလူကြိုက်များပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာများနှင့်ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ထောက်ခံသည်။ နောက်ထပ်အရာ, ရစေရန်ပြုလုပ်ထားရန်, ထိုသင်္ဘောများနှင့်ခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေပေါ်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းအလွန်သင့်လျော်ဘူး။
မကြာခဏစာအုပ်ငယ်ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ကြော်ငြာပုံနှိပ်ခြင်းကိုအသုံးန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက်။ သူတို့ကနှစ်ခုသုံးခုသို့မဟုတ် ပို. ပင်ယူနီဖောင်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စာရွက်ကွေးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုချင်းစီဘက်မှာနေရာချနေသည်: စာသား, ဂရပ်ဖစ်, ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်။ များသောအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဒါပေါ်တွင် Microsoft Office ကိုထုတ်ဝေသူ, Scribus, FinePrint နှင့်အဖြစ်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အထူးဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဖန်တီးစာအုပ်ငယ်။
WAV format နဲ့က MP3 ဂီတပြောင်း
တခါတရံသငျသညျအမြားဆုံးကိုမကြာခဏကြောင့်က disk space ကိုအများကြီးတက်ယူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုက MP3 player ကိုကစားဘို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ, MP3 format နဲ့မှ WAV အသံဖိုင်တွေကို convert ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်ကို PC ပေါ်မှာအပိုဆောင်း software ကို install လုပ်ပါမှသင်တို့ကိုကယ်တင်မည်သောဤပြောင်းလဲခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်ကြောင်းအထူးပြုအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ, ကိုသုံးနိုင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များ - ကုမ္ပဏီ၏ကြော်ငြာအတွက်အဓိက tool ကိုများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုမှသူမ၏န်ဆောင်မှုပူဇော်ကြ၏။ သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကြော်ငြာနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်နိုင်ပါတယ်မိန့်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အတူအများကြီးကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြင်ဆင်ပါ။
အွန်လိုင်းတစ်ဦး tag ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
စာသားထဲမှာအရေးကြီးသောစကားများကိုအလေးပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အရှိဆုံးထောက်ပြဖို့, စာသားထဲမှာထားသောစာပိုဒ်တိုများ tag ကိုမိုဃ်းတိမ်ကိုကူညီပေးပါမည်။ အထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်လှပသောစာသားမသတင်းအချက်အလက်မြင်ယောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့မောက်၏အနည်းငယ်ကလစ်အတွက်ဖန်တီးနိုင်သော tag ကိုမိုဃ်းတိမ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် functional က်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းပြောဆို။